Agenda Oppositions Ruramisiro 2022 ▷ zviite kuti zvivandudzwe HERE! | Kuumbwa uye kudzidza
Kana isu tichifunga nezvekushanda munzvimbo dzakasiyana dzeHurumende yeJustice, isu tinofanirwa kushandisa mashoma kupokana kweruramisiro. Pakati pavo, tinowana zvigaro zvitatu zvekufunga nezvazvo uye zvatichazotaura newe zvakadzika nhasi, kuti iwe ugone kugadzirira bvunzo dzako nenzira yakanaka kwazvo.
Agenda kupesana kweruramisiro
Maitiro ekufambisa - Mahara kutendeuka
Inosanganisira sirabhasi, bvunzo, fungidziro dzinoshanda, bvunzo dzekunyepedzera uye kuwana kwemahara zviwanikwa pamhepo.
Tenga Vol. I>
Tenga Vol. II>
Tenga Vol. III>
Maitiro ekufambisa - Yemukati kusimudzira
Maitiro ekugadzirisa - Mahara kutendeuka
Maitiro ekugadzirisa - Yemukati kusimudzira
Maitiro uye Administrative Management Muviri
Izvi zvinopesana ndezveboka A2Naizvozvo, kuti ukwanise kuzviratidza kwavari, unoda Dhiploma, Injiniya Yehunyanzvi kana zvakafanana. Uye zvakare, iwe unofanirwa kuve unopfuura makore gumi nemasere ekuberekwa, uine nyika yeSpanish, usatorerwe kuita mabasa pamwe nekusava nerekhodi.
Nhamba yenzvimbo dzave dzichiwedzera bvunzo dzekutonga. Saka haingotarise chete kumutumbi weProcedural Management, asi kune mamwe maviri. Muna 2016 nhamba yepamusoro kwazvo yenzvimbo yakawanikwa, nepo muna 2017 inopfuura 3.500. Panguva ye2018 3.593 yakapihwa. Sezviri pachena, chinofadza ndechekuti nzvimbo dzichave dziri kuunganidzwa. Saka pakutanga kwe2019, kufona nyowani kuchaonekwa, iine rekodhi yenzvimbo.
Inofungidzirwa izvozvo bvunzo dzezvimwe chete zvinoitika pakati pegore 2019, sezvakaitika mumakore apfuura. Ichokwadi kuti iyi data rese muchimiro chemamaki inovhara miviri mikuru yekupokana kwekutonga. Nekuti muProcedural Management, nzvimbo dzinodzikira zvishoma. Pakati pavo vese, chete makumi mashanu nematanhatu akashevedzwa.Zvino zvinongomirira kumirira masamanisi matsva aunogona kuwana pane webhusaiti ye Ministry of Justice.
Chikamu I: Bumbiro remutemo, kodzero dzakakosha uye kurongeka kweHurumende.
Nhaurwa 1: Spanish Bumbiro ra1978.
Nhaurwa 2: Kodzero yekuenzana uye kusasarura. Matanho ekudzivirira pakurwisa mhombwe.
Nhaurwa 3: Hurumende neHurumende.
Nhaurwa 4: Sangano renharaunda yeHurumende.
Nhaurwa 5: European Union.
Chikamu chechipiri: Kurongeka uye chimiro chematare.
Nhaurwa 6: Simba Rokutonga
Nhaurwa 7: Kurongeka uye masimba ematare nematare ini.
Nhaurwa 8: Kurongeka uye masimba ematare nematare II.
Nhaurwa 9: Kururamisira kworugare.
Nhaurwa 10Kodzero dzevagari usati watongwa.
Nhaurwa 11: Yazvino hofisi yekutonga: hofisi nyowani yekutonga.
Nhaurwa 12: Mutongi.
Nhaurwa 13: Mitezo yevashandi vehurumende vari kushumira kweHurumende yeJustice.
Nhaurwa 14: General Corps Ini
Nhaurwa 15: General Corps II.
Nhaurwa 16: Syndical rusununguko. Kodzero yekurova. Utano nekudzivirira njodzi dzebasa.
Chikamu chechitatu: Kutongwa kwepamutemo
A) Mitemo yakajairika yenyaya dzese dzevanhu.
Nhaurwa 17: Mibvunzo yakajairika pamabatiro ehurumende ini
Nhaurwa 18: General mibvunzo pamusoro pehurumende maitiro II
Nhaurwa 19: Masimba uye masimba.
Nhaurwa 20: Nzvimbo nenguva yekutongwa kwematare.
Nhaurwa 21: Maitiro enzira yemutongi nevanyori vematare.
Nhaurwa 22: Mabasa ekutaurirana nemamwe matare uye zviremera.
Nhaurwa 23Maitiro ekutaurirana kumapati uye nevamwe vatori vechikamu muchiitiko ichi.
Nhaurwa 24: Yekutonga uye zvinyorwa faira.
B) Maitiro eVanhu
Nhaurwa 25: Maitiro ekuzivisa muMutemo weKurongwa kweVanhu.
Nhaurwa 26: Muedzo wenguva dzose.
Nhaurwa 27: Kutonga nemuromo.
Nhaurwa 28: Maitiro akasarudzika I: Maitiro echikamu chekutonga chemidziyo.
Nhaurwa 29: Maitiro akasarudzika II: Order yekubhadhara maitiro uye kuchinjanisa kutonga.
Nhaurwa 30: Maitiro ekuroora uye avo makirasi. Maitiro ekusakwanisa kwevanhu.
Nhaurwa 31: Maitiro ekuzvidira ekutonga.
Nhaurwa 32: Izvo zviwanikwa.
Nhaurwa 33: Zviwanikwa zvinoshamisa.
Nhaurwa 34: Kumanikidzwa kuurayiwa.
Nhaurwa 35: Kuurayiwa kwemari.
Nhaurwa 36: Kutevedzera maitiro.
Nhaurwa 37: Kuuraya kusiri kwemari.
Nhaurwa 38: Matanho ekudzivirira.
Nhaurwa 39: Mari uye maitirwo enzira.
C) Rejista yeVanhu
Nhaurwa 40: Rejista yeVanhu Ini
Nhaurwa 41: Civil Registry II
Nhaurwa 42: Civil Registry III
D) Maitiro ematsotsi
Nhaurwa 43: Criminal maitiro maitiro
Nhaurwa 44: Mapato ekuita kwematsotsi.
Nhaurwa 45: Pfupiso.
Nhaurwa 46: Matanho ekudzivirira.
Nhaurwa 47: Pakati pepakati.
Nhaurwa 48: Icho chiratidzo.
Nhaurwa 49: Muchidimbu maitiro.
Nhaurwa 50: Maitiro ekukurumidza kutongwa kwemamwe mhosva.
Nhaurwa 51: Maitiro pamberi pedare redzimhosva.
Nhaurwa 52: Kuchengetedzwa kwematare pamberi pematare emhirizhonga kuvanhukadzi
Nhaurwa 53Maitiro ekupara mhosva kwevadiki.
Nhaurwa 54Kugadziriswa kwekutongwa pamhosva diki.
Nhaurwa 55: General system yekukwirira mumatare edzimhosva.
Nhaurwa 56: Kuitwa kwemitongo yematsotsi.
E) Kukakavara-manejimendi uye maitiro evashandi
Nhaurwa 57: Kukakavara-kweyehutongi kukwidza ini: Sangano renzvimbo yekutonga.
Nhaurwa 58: Kukakavara-manejimendi kukwikwidza II: Maitiro ehurongwa, kugonesa, kumiririra uye kudzivirira. Zviito zvinonetsa.
Nhaurwa 59: Kukakavara-manejimendi kukwikwidza III: Nyaya yekutanga, kufaira kwenyaya yekukumbira uye kubvunza pane iyo faira. Nzvimbo yevapomeri uye kubvuma kwenyaya iyi.
Nhaurwa 60: Kukakavara-manejimendi kukwikwidza IV: Kuda uye mhinduro. Kuedza, kuona uye mhedziso. Mitongo.
Nhaurwa 61: Nzira yakapfupikiswa mune yekukakavara-manejimendi munda.
Nhaurwa 62: Zviwanikwa mukukakavara-manejimendi maitiro.
Nhaurwa 63: Maitiro akasarudzika.
Nhaurwa 64: Zvipo zvakajairika kukakavara-manejimendi maitiro.
F) Kukakavara-manejimendi uye maitiro evashandi
Nhaurwa 65: Maitiro ebasa.
Nhaurwa 66: Kudzivirirwa kwemaitiro.
Nhaurwa 67: Maitiro akasarudzika.
G) Mitemo yemitemo yekutengesa
Nhaurwa 68: Makwikwi evakweretesi.
Kutanga kurovedza muviri: Iyo yakawanda sarudzo yesarudzo yemibvunzo, iine zana mibvunzo pamwe neina mibvunzo yekuchengetedza. Iwo mashoma zvibodzwa makumi mashanu emapoinzi uye nguva yekuyedzwa maminetsi makumi mapfumbamwe.
Yechipiri kurovedza muviri: Iyo inyaya inoshanda (risati rave chiitiko chechitatu). Yese mibvunzo makumi maviri nembiri, uko mamaki mashoma ekupasa anozova makumi maviri uye kune izvi isu tichava nemaminetsi makumi mana nemashanu chete.
Yechitatu kurovedza muviri: Kunyora rugwaro, kwatinofanira kunyora nezve misoro miviri yakasarudzwa neDare. Iwo mashoma zvibodzwa makumi mashanu emapoinzi ekupasa uyu bvunzo. Tichava nemaawa mana ekuipedza.
Kana iwe ukasarudza iyo kusimudzirwa kwemukati, ipapo pachave nemitambo miviri chete pane matatu.
Kutanga kurovedza muviri: Iyo yakawanda sarudzo ine makumi mashanu mibvunzo. Chiyero chinotora maminetsi makumi matanhatu uye huwandu hwayo hwakawanda zvibodzwa zana.
Yechipiri kurovedza muviri: 10 mibvunzo yekupindura nezvenyaya inoshanda. Iwo akakwira zvibodzwa makumi mashanu emapoinzi uye inguva yekuzviita, maminetsi makumi matanhatu.
Mushure mechikamu chechinzvimbo, chikamu chechipiri chemakwikwi chinosvika, panowanikwa zvakafanira. Mutemo madhiri anowedzera gumi nemashanu, makosi epamutemo anosvika kumaawa makumi maviri nemapfumbamwe, wedzera matatu mamwe mapoinzi. Ipo kana makosi aya achibva kuma15 kusvika kumaawa makumi mashanu nepfumbamwe, ipapo mapfumbamwe anowedzerwa kwauri. Chekupedzisira, kana vakapfuura maawa makumi matanhatu, ipapo mapoinzi anokwira kusvika 29. Mitauro iri padanho B3 kana B30 ingori imwezve poindi. Pfungwa mbiri kana uine C59 kana C5.
Mabasa uye muhoro wemukuru weProcedural uye Administrative Management
Pakati pemabasa atinoratidza:
Gadzirira zvinyorwa zvinyorwa kana pfupiso dzemotokari
Saina uye simbisa kuoneka
Patinotaura nezve muhoro, zvinofanirwa kutaurwa kuti zvinogona kugara zvichitsamira pane chaicho chinzvimbo chebasa, kunyangwe mukati meHurumende yeRuramisiro. Asi iyo yakazara yemwedzi pamari iri kutenderera zviuru zviviri maeuro uye 2.000 euros.
Kupikiswa kweProcedural Processing
Mune ino kesi, kuti ukwanise kutora bvunzo dzekugadzirisa wega, iyo baccalaureate kana yakaenzana inodikanwa seyunokwanisa uye kuve pamusoro pemakore gumi nemasere ekuberekwa. Sezvazvaive zviri mune zvaidikanwa zveProcedural Management Oppositions.
Ini chikamu chesangano
Nhaurwa 1: Spanish Constitution ya1978
Nhaurwa 2: Kodzero yekuenzana uye kusasarura kunoenderana nehunhu. Matanho ekudzivirira pakurwisa mhombwe.
Nhaurwa 3: Hurumende uye manejimendi.
Nhaurwa 4: Sangano renharaunda yenyika mubumbiro.
Nhaurwa 6: Simba regweta.
Nhaurwa 8: Kurongeka uye kugona kwematare nematare II.
Nhaurwa 9Kodzero dzevagari usati watongwa.
Nhaurwa 10: Yazvino hofisi yekutonga: Hofisi nyowani yekutonga.
Nhaurwa 11: Mutongi.
Nhaurwa 12: Nhengo dzevashandi vehurumende vari kushumira kwehutongi hwehutongi.
Nhaurwa 13: General miviri I
Nhaurwa 14: General miviri II.
Nhaurwa 15: Syndical rusununguko. Kodzero yekurova. Utano nekudzivirira njodzi dzebasa.
II Chikamu chetsika mutemo
Nhaurwa 16: Maitiro ekuzivisa mumutemo wehurumende maitiro: Zvakajairika uye zvekutongwa kutongwa.
Nhaurwa 17: Maitiro ekumanikidza mumutemo wehurumende maitiro.
Nhaurwa 18Maitiro akasarudzika mumutemo wehurumende.
Nhaurwa 19: Simba rekuzvidira.
Nhaurwa 20: Mhosva yekupara mhosva ini: Zvakajairwa, zvakapfupikiswa uye juri
Nhaurwa 21: Kupara mhosva II: Kuedzwa kwemhosva pfupi, kukurumidza kutongwa uye kuuraya.
Nhaurwa 22Kukakavara-kweyehutongi kukwidza: Zvakajairika, zvakapfupikiswa uye zvakasarudzika maitiro.
Nhaurwa 23Maitiro evashandi: Maitiro akajairwa, ekudzinga uye eSocial Security maitiro.
Nhaurwa 24: Zviwanikwa.
Nhaurwa 25: Nzvimbo nenguva yekutongwa kwematare.Nhaurwa 26: Maitiro enzira yemutongi nevanyori vematare.
Nhaurwa 27: Mabasa ekutaurirana nemamwe matare uye zviremera.
Nhaurwa 28Maitiro ekutaurirana kumapati uye nevamwe vatori vechikamu muchiitiko ichi.
Nhaurwa 29: Rejista yeVanhu Ini
Nhaurwa 30: Civil Registry II
Nhaurwa 31: Yekutonga uye zvinyorwa faira.
Isu tinoziva kuti nzvimbo dzinopfuura zviuru zviviri dzakapihwa kururamisira. Asi chaizvo pamutumbi uyu, wekugadzirisa maitiro, ivo vakangosvika munzvimbo dzinosvika mazana masere. Pakati pavo vese, makumi mashanu nevatanhatu vane mapoinzi akasiyana enharaunda.
Kutanga kurovedza muviri
Chikamu I: Yakawanda sarudzo yemibvunzo yemibvunzo ine gumi nemana mibvunzo. Na104 iyo ichave yakachengetwa. Ichi chikamu chinotora maminetsi makumi manomwe neshanu uye chakakamurwa kubva pa4 kusvika pamapoinzi zana. Mhinduro dzakarurama wedzera 75 poindi, nepo mhinduro dzisina kukodzera dzichiwedzera 0. Rangarira kuti dzisina kupindurwa hadziwani zvibodzwa.
Chikamu II: 22 yakawanda sarudzo mibvunzo pamusoro penyaya inoshanda. Uyu muedzo unotora maminetsi makumi mashanu nemashanu uye kupatsanurwa kwayo kunosiyana kubva pa45 kusvika pamakumi mana emapoinzi. Mhinduro yega yega chaiyo ichawedzera mapoinzi maviri, mhinduro dzisiri idzo dzinobvisa mapoinzi 0. Ipo iyo isina kupindurwa, ichave 40 mapoinzi. Kuti upase bvunzo iyi unoda makumi maviri. Zvikasadaro, iwe hauchakwanise kuenderera kunotevera iko kurovedza kana chikamu chebvunzo.
Yechipiri kurovedza muviri
Zviri zvekunyora chinyorwa muShoko. Zvese zviri zviviri kumhanya uye fomati zvinokosheswa. Une maminitsi gumi nemashanu ekuita chikamu ichi. Zvibodzwa zvako zvichave makumi matatu.
ari nzvimbo dziripo dzekumusoro kusimudzira kupokana kwemaitiro ekugadzirisa ivo vadiki. Tine nzvimbo mazana maviri negumi nemapfumbamwe, dzinogoverwa munzvimbo dzakasiyana dzakazvimiririra. Kuti uwane yekushambadzira kwemukati kune zvekare nhevedzano yezvinodiwa:
Iva nemubhadharo kana hunyanzvi degree.
Kuva mushandi wehurumende kumabasa ekubatsira vatongi.
Bvumidza hurefu hwemakore angangoita maviri, kungave sevashandi vehurumende, venguva pfupi kana kutsiva.
Iko bvunzo yekusimudzira kwemukati kunosanganisira maviri maekisesaizi:
Kutanga kurovedza muviri: 50 yakawanda sarudzo mibvunzo. Uchave nemaminitsi makumi matanhatu ekupedzisa chikamu ichi. Mhinduro yega yega chaiyo inowedzera mapoinzi maviri, uye mhinduro isiriyo inobvisa mapoinzi 60.
Yechipiri kurovedza muviri: Ridza chinyorwa muMicrosoft Word pakombuta. Muedzo uyu unotora maminetsi gumi nemashanu. Chii chinokosheswa? Ose mafomati uye kumhanya kwekunyora uye kusimudzira.
Pachikamu chekupedzisira, huwandu hwezviitwa izvi huchaitwa. Asi zvinofanirwa kutariswa kuti hukuru muchinzvimbo chinofanira kubatwa hukosheswa, pamwe nezvimwe zvinodiwa kana makosi akatenderwa.
Mabasa anoitirwa mutumbi weProcessural Procedure
Kugadzirira kwemaminetsi, pamwe nezviziviso kana mafambiro.
Kugadziriswa kwezvinhu zvakasiyana kana kusarudzwa.
Sezvakaita nemumwe muviri wevanopokana neruramisiro, iyo yekupedzisira mubairo inogona kugara ichisiyana. Asi zvinofanirwa kutaurwa kuti iyo yakazara uye yemwedzi muhoro inogona kunge iri kuma1800 / 2400 euros.
Kupikiswa kwemubatsiri wedare
Mune ino kesi isu takatarisana ne makwikwi eboka C2. Ndosaka kuti tiwane iwo, isu tinoda mudzidzi akapedza kudzidza kana degree rakaenzana. Nenzira imwecheteyo seyapfuura, iwe unofanirwa kuve uine makore 18 uye uve neSpanish nyika.
Kuwedzera kune akajairwa mapoinzi neakambopfuura aya, zvinofanirwa kutaurwa kuti kune maJudicial Assistance Oppositions vaive dzinenge 525 zvigaro. Hwerengedzo ye37 yeayo mazana mashanu nemakumi mashanu nemashanu akange akachengeterwa uye mamwe, zvekare, akagoverwa nyika
Nhaurwa 1: Spanish Bumbiro ra1978
Nhaurwa 4: Sangano renharaunda yenyika.
Nhaurwa 9: Charter yekodzero dzevagari pamberi pokutongwa.
Nhaurwa 10: Kuvandudzwa kwehofisi yekutonga.
II Maitiro Mutemo
Nhaurwa 16: Maitiro ekuzivisa: Anowanzoitwa kutongwa, kutongwa kwemazwi uye akakosha maitiro.
Nhaurwa 17Maitiro ekuuraya: mari uye isiri-mari.
Nhaurwa 18: Mhosva yekutongwa: Zvakajairika, zvakapfupikiswa, kutongwa pamhosva diki nedare.
Nhaurwa 19: Kukakavara-manejimendi maitiro: akajairwa, akapfupikiswa uye akakosha.
Nhaurwa 20Maitiro evashandi - maitiro akajairwa uye kudzingwa. Maitiro ekuchengetedza vanhu.
Nhaurwa 21: Nzvimbo nenguva yekutongwa.
Nhaurwa 22: Maitiro enzira yemutongi uye munyori wedare. Mitemo yeFiscal Ministry.
Nhaurwa 23: Mabasa ekutaurirana nemamwe matare uye zviremera.
Nhaurwa 24Maitiro ekutaurirana kumapati uye nevamwe vatori vechikamu muchiitiko ichi.
Nhaurwa 25: Kunyoreswa kwevanhu.
Nhaurwa 26: Pfungwa dzekutonga faira uye zvinyorwa.
Mune ino kesi, yemakwikwi emakwikwi ebvunzo dzeMatare Edzimhosva, iwe unongofanira kupasa bvunzo. Asi hongu, ichave ine zvikamu zviviri kana maviri maekisesaizi ekufunga nezvazvo.
Kutanga kurovedza muviri: Bvunzo rondedzero mhando uye kubvisa. Ichave sarudzo dzakawanda nemibvunzo gumi nemana. Vane vavo vachasara sedura. Iwo zvibodzwa zvichave kubva pa104 kusvika zana mapoinzi. Mhinduro chaidzo dzichawedzera poindi imwechete, izvo zvisiri izvo zvinobvisa 0 mapoinzi uye asina kupindurwa haazopihwe Une maminetsi makumi manomwe nemashanu ekupedza chikamu ichi chebvunzo.
Yechipiri kurovedza muviri: Kufungidzira kunoshanda. Pane mibvunzo makumi mashanu nemaviri, sezvo miviri yacho yakachengetwa. Iwo chaiwo anowedzera mapoinzi maviri, asiri iwo chaiwo anobvisa 52 mapoinzi. Muchikamu chino, zvinofanirwa kutariswa kuti isina mhinduro kana isina chinhu mibvunzo inobvisa 0,5. Kune ichi chikamu une nguva yemaminitsi makumi matanhatu.
Kana nharaunda yakazvimiririra iine mutauro wepamutemo, panogona kunge paine imwezve bvunzo mumutauro iwoyo kuti uone huwandu hwayo. Iyi makwikwi anewo iyo 'chikamu chemakwikwi'. Mariri, hunhu hwemupikisi huchafungidzirwa (mazita, madiploma kana makosi anotenderwa).
Mabasa anofanira kuitwa uye muhoro weVatongi Rubatsiro Corps
Pakati pemabasa anogona kuitwa nemubatsiri wezvekutonga, ticharatidza zvinotevera:
Chengetai kurongeka mumakamuri.
Kuteerera nematare pamwe nekuburitswa.
Ivo vanogona kuita mabasa seyekutonga mapurisa.
Faira remafaira ekutonga.
Semari yakazara uye yemwedzi muhoro, zvinofanirwa kutaurwa kuti a mukuru wemuviri uyu achabhadharisa pakati pe1600 euros uye 2000 euros.